Wararka - Saddex dhibcood oo dabaq ah, toddoba dhibcood oo rakibid ah, dadka badankoodu waxay iska indha tiraan tafaasiishaan rakibaadda dabaqa!
Had iyo jeer waxaa jiray weedh ka timaadda warshadaha sagxadda in sagxadda alwaaxdu ay tahay “dabaq saddex-dhibic ah iyo rakibidda toddoba-dhibic”, taas oo ah, haddii rakibidda ay wanaagsan tahay iyo in kale ayaa go’aamisa 70% tayada sagxadda. Isticmaalka dabaqa oo aan ku qanacsanayn waxaa inta badan sababa dhagaxa oo aan habboonayn.
Sidaa darteed, si dhulka looga dhigo mid cusub oo cusub, kuma eka oo kaliya tayada iyo tayada dhulka, laakiin sidoo kale rakibidda saxda ah iyo dayactirka taxaddar leh. Maanta waxaan eegi doonaa faahfaahinta sagxadda dhulka!
Diyaargarowga waddada waa in uu jiraa
Kormeer dhammaystiran oo ku saabsan deegaanka laamiga ah ka hor inta aan la dhigin waa furaha, kaas oo ah iskuxir muhiim ah si loo hubiyo tayada laamiga.
Degdeg kuma filna. Dabaqa ayaa la dhigaa iyada oo aan si buuxda loo kormeerin deegaanka, oo u nugul dhibaatooyinka tayada. Ka hor intaan la dhagax -dhigin, samee 7 -daan qodob oo bilow in aad dhagax -dhigto.
Marka hore, qiyaas cabbirka biyaha dhulka
Adeegso mitirka ka kooban qoyaanka si aad u cabirto waxa ku jira qoyaanka dhulka, heerka guud ee dhulka waa <20%, iyo rakibidda halbeegga dhulka waa <10%.
Biyaha ku jira dabaqa laamiga ah ayaa aad u sarreeya, sagxaduna waxay nuugtaa biyaha wayna fidsan tahay, taas oo si sahlan u sababi karta dhibaatooyin sida qaanso, durbaan, iyo buuq. Qoyaanka qoyaanka ayaa lagama maarmaan ah waqtigan si looga fogaado dhibaatooyinka isticmaalka xiga.
Midda labaad, marka lagu daro dabaqyada SPC, sagxadaha alwaaxa waa in la hubiyaa marmarsiiyo
Godad qudhaanjo oo kun-mayl ah ayaa dumay, dhalatadu waa halis aad u weyn. Hawlaha hubinta iyo ka -hortagga waa in la sameeyaa ka hor rakibidda, haddii kale waxay noqon doontaa goor dambe marka la ogaado.
Saddex, hubi fidnaanta dhulka
Haddii dhulka fidsan uusan gaarsiisanayn heerkii, waa sahlan tahay in la keeno dhibaatooyin ay ka mid yihiin jeexitaanka geesaha, warping, arching, iyo buuqa. Shaqada dheellitirka ah waa in la sameeyaa ka hor inta aan la dhagax dhigin.
Waxaan guud ahaan u isticmaalnaa taliye ku tiirsan laba mitir si loo cabiro roogaga. Haddii uu jiro farqi ka weyn 3 mm ama xitaa 5 mm oo ka hooseeya taliyaha, waxay ka dhigan tahay in dhulku uusan sinnayn oo uu ka gudbay sharuudaha laamiga ah ee sagxadaha alwaaxa ah.
Ta afaraad, hubi in dhulku adag yahay
Haddii dhulku uusan ahayn mid ku filan, waxaad cagaha ku laadin kartaa dambas. Tani waa waxa aan inta badan dhahno. Dhacdadani waa mid aad looga xumaado in la nadiifiyo ka dib markaad rakibato dabaqa. Si kasta oo aad u nadiifiso geesaha, waxaad sii wadi doontaa boodhka dhulka.
Dadka dabaqa maraya ayaa cadaadis saaray waxayna sababeen in dambaska oo dhami ka soo baxaan kala -goysyada iyo geesaha. Tan waxaa sabab u ahaa habsocodkii aan ku filnayn ee salka hoose markii dhulka la simay.
Haddii ay jiraan daloollo ama ifafaalo qolof leh, waxaad u baahan tahay inaad dib u daweyso dhulka, haddii kale waxay si sahal ah u saamayn doontaa nolosha adeegga dabaqa.
Shanaad, iska ilaali hawlgallada isku dhafka ah
Hawsha dhagaxa dhulka waa in la fuliyaa ka dib marka la dhammaystiro oo si sax ah loo aqbalo mashruuca dhulka qarsoon, mashruuca saqafka, mashruuca darbiga, iyo mashruuca biyaha iyo korontada. Haddii hawlgalka iskutallaabtu uu sahlan yahay in dhulka waxyeello loogu geysto, haddii mashruuca darbiga aan la dhammaystirin, jayga soo dhacaya wuxuu sababi doonaa boodh iyo xoqid. Dhibaatooyinka sida waxyeellada sagxadda, iyo dhibaatooyinka ay ka mid yihiin in la rusheeyo rinjiga iyo dahaarka dhulka iyo waxyeellada bilicsanaanta dhulka.
Intaa waxaa dheer, haddii ay jiraan dhibaatooyin xagga shaqada isku dhafka ah, mas'uuliyadaha aan caddayn ayaa waliba saamayn doona ilaalinta xuquuqda.
Lixaad, la -tashiga injineernimada qarsoon iyo calaamadeynta
Kahor intuusan bilaabin dhismaha, milkiilaha waa inuu tilmaamaa meesha mashruuca qarsoon yahay uuna sameeyo calaamad caan ah si looga fogaado waxyeellada dhuumaha biyaha ee la galiyay, tuubooyinka hawada, xadhkaha korontada iyo khadadka isgaarsiinta inta dhismuhu socdo, iyo inuu ka fogaado waxyeelada labaad ee qurxinta.
Toddobaad, haddii ay jiraan tallaabooyin biyuhu aanay jirin (Dabaqa SPC uma baahna inuu hubiyo tallaabooyinka aan biyuhu lahayn)
Dhulku wuxuu ka baqayaa biyaha. Kadib markay biyuhu soo duulaan, waxay yeelan doontaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabarro, degumming iyo deform, taasoo ka dhigaysa mid aan la isticmaali karin. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad hubiso cabbirrada biyuhu ka hor intaanad gogol -dhigin iyo haddii ay jiraan biyo -bax ku jira guriga. Haddii ay jirto xaalad noocaas ah, waa in la daaweeyaa ka hor inta aan dhulka la dhigin.
Sideed, qurxinta waa dhacdo weyn. Ka -dhaafitaan yar ayaa si fudud u horseedi kara dhacdooyin waaweyn. Marka qof walba iibsado dabaqa quruxda badan oo uu sugo rakibidda, ha ilaawin shaqada hordhaca ah. Diyaargarowga horudhaca ah ayaa si fiican loo qabtay guriguna waa raaxo.
Dukaamada sagxadda caadiga ah waxay leeyihiin saygeyaal rakibidooda u gaar ah, kuwaas oo qaadan doona tababar mideysan ka hor inta aysan shaqada bilaabin, si arrimahan looga fogaado.
Haddii aad adigu iibsato dabaqa oo aad si gaar ah u kiraysato rakibayaha, markaa waa inaad xusuusataa qodobbadaas, oo aad ka taxaddartaa si aad uga fogaato dhibaato badan ~
Waqtiga dhejinta: Jul-13-2021